I-iPhone 13 ene-ID yokuChukumisa kwiscreen ikhona, nangona sinokuthi singayiboni | IPhone iindaba
I-iPhone 13 eneTouch ID kwiscreen ikhona, nangona singekhe siyibone
I-Apple isenokuba sele ivavanya Inkqubo yokwazisa ngeminwe eyakhiwe kwiscreen se-iPhone 13, kodwa kunokwenzeka ukuba asiyi kuyibona, ubuncinci kulo nyaka.
Ukusukela oko iApple yalahla i-ID yeTouch endaweni ye-ID yobuso, uninzi lwabo baye bakhalaza malunga notshintsho kwaye babanga ukubuyela ekusetyenzisweni kweminwe njengenkqubo yokuchonga kwi-iPhone yethu. Utshintsho kuhlala kunzima, kwaye baninzi abachasayo ngaphandle kwento yokuba i-ID yobuso ibonakalisile ukuba ikhuseleke ngakumbi, iyakhawuleza kwaye inde ngakumbi kuneTouch ID. Ubuncinci de kufike iimaski.
Ubhubhane we-COVID-19 wenze ukuba isiqingatha sobuso bethu sifihlwe kangangeeyure ezininzi ngemini, esenza inkqubo yobuso buka-Apple ingabinamsebenzi. Nangona iApple Watch iphucule inkqubo yokuvula nge-ID yobuso, Ukuvumela ukuvula kwayo nanini na sithwala iwotshi yeApple nathi, inyani kukuba i-ID yobuso ichukumisekile kwaye iApple inokutshintsha okanye yongeze inkqubo entsha yokuchonga kwifowuni yakho.
Kwi-Android besele sinabafundi abangaphantsi kwescreen sokufunda ngeminwe ixesha elide. Kodwa okwangoku akukho nanye kwezi nkqubo kuvavanyo inokuqwalaselwa njenge "isondele ngokugqibeleleyo" ngokwesantya, ukuthembeka kunye nokhuseleko. I-Apple isebenze kwinkqubo yayo ixesha elide, ikwakhona IPrototype 13 eyayibandakanyayo, kodwa ngokukaMark Gurman, ayizukufika ngexesha lokuphehlelelwa kwesiphelo.
Kwakhona I-Apple yayiza kusebenza kwi-ID yobuso edityaniswe kwiscreenOko kukuthi, ukuphelisa "inotshi" okwangoku ethintela umphambili we-iPhone yethu ekubeni siscreen. Ezi nkqubo zimbini zinokuhlala kunye kwi-iPhone ezayo, nangona singazi ukuba kanjani. Mhlawumbi i-ID yobuso idityaniswe kwiscreen kuphela kwiimodeli zePro kunye neemodeli eziqhelekileyo ezigcina inotshi, okanye i-ID yobuso kunye ne-ID yokuChukumisa edityanisiweyo kwiPro kunye neemodeli eziqhelekileyo kuphela nge-ID yesazisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-iPhone 13 eneTouch ID kwiscreen ikhona, nangona singekhe siyibone
I-Apple Watch inceda ukuhlangula ixhoba lengozi yezithuthi
U-Apple ngokungalindelekanga nangokuthe cwaka usungule 'iSifundo seNtetho yeSiri'